अमेरिकालाई किन चिढ्याउँदैछन् दाहाल? | Nagarik News - Nepal Republic Media
अमेरिकालाई किन चिढ्याउँदैछन् दाहाल?
अहिलेको परिस्थितिमा भारतलाई मात्र सन्तुलन गराएर सत्तामा पुग्ने अवस्था नरहेकाले चीनसँग पनि सन्तुलन मिलाउन दाहाल प्रयासरत छन्।
मंगलबार तीनदिने नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा दाहालले अमेरिकाको महत्वाकांक्षी परियोजना इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीलाई अस्वीकृत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। वाङ नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा दाहालले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा दाहालले नेपाल असंलग्न नीतिमा दृढ रहेको र चीनविरुद्ध अघि सारिएको कथित इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीलाई अस्वीकृत गर्ने बताएको उल्लेख छ। दाहालले चीनको विकासमा अवरोध गर्ने कुनै पनि परियोजना स्वीकार नगर्ने र चीनको विकास नेपालका लागि पनि अवसर भएको बताएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दाहालले हङकङमा पछिल्लो समय देखिएको समस्यालाई पनि चीनको आन्तरिक मामिला भएको बताएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटा दाहालले एकपछि अर्काे गर्दै अमेरिकालाई चिढ्याउने अभिव्यक्ति दिनुलाई ‘सरप्राइज’ भन्छन्। सापकोटा दाहालका अमेरिकाविरोधी अभिव्यक्ति आश्चर्यजनक ढंगले आएपनि त्यसका पछाडि विभिन्न पक्षले काम गरेको बताउँछन्। नेकपाभित्रको पूर्वमाओवादी खेमाको विश्वास जित्न जित्न दाहालले आफूलाई अमेरिकाविरोधी देखाउने प्रयास गरिरहेको सापकोटा दाबी गर्छन्। सुरुदेखि नै साम्राज्यवाद र विस्तारवादको विरोध गर्दै आएको माओवादी खेमालाई अमेरिकाको विरोध गर्दा विश्वासमा लिन यस्तो गरेको हुनसक्ने उनको तर्क छ। पहिले भारत र विस्तारवादको विरोध गरे पनि अहिले त्यसलाई निरन्तरता दिँदा भारतबाट तत्कालै मूल्य चुकाउनुपर्ने भएकाले दाहालले भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलन गर्दै अमेरिकाको विरोध गरिरहेको सापकोटा बताउँछन्।
अहिलेको परिस्थितिमा भारतलाई मात्र सन्तुलन गराएर सत्तामा पुग्ने अवस्था नरहेकाले चीनसँग पनि सन्तुलन मिलाउन दाहाल प्रयासरत रहेको सापकोटाको भनाइ छ। नेपालमा चीन र अमेरिकाले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका बेला चीनको समर्थनमा बोल्दा त्यसले चीनलाई ठूलो गुन लाग्ने बुझेर उनले पछिल्लो अभिव्यक्ति दिएको सापकोटाको अनुमान छ। दाहालले भित्रैदेखि अमेरिकालाई चिढ्याएको मान्न भने सापकोटा तयार छैनन्। उनी भित्रीरुपमा दाहाल र अमेरिकाबीच भद्र समझदारी रहेको दाबी गर्छन्। भेनेजुयला प्रकरणमा विवादमा तानिएपछि पनि अमेरिकाले दाहाललाई भिसा दिएको सन्दर्भले यसलाई पुष्टि गर्ने उनी बताउँछन्। कतिपय विषय कार्यकर्तामाझ खपतका लागि बोल्नुपर्ने बाध्यताबारे दाहालले अमेरिकालाई सहमत गराएको सापकोटाको तर्क छ।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०७६ ०६:३८ बिहीबार
निकोलास_मडुरो अमेरिका पुष्पकमल_दाहाल भेनेजुयला